सेयर बजारमा करेक्सन - Naya Patrika
काठमाडौं, २७ चैत | चैत २७, २०७४
साताको दोस्रो कारोबार दिन बजारमा करेक्सन भएको छ । पछिल्लो चार कारोबार दिनदेखि नेप्से निरन्तर उकालो लागेको थियो । पछिल्ला चार दिनमा नेप्से एक सय अंक बढेको थियो । यस दिन नेप्से करिब ७ अंक घटेको छ । बजार निरन्तर उकालो लागेपछि लगानीकर्ताहरू नाफा सुरक्षित गर्नतर्फ लागेका छन् । फलस्वरूप यस दिन बजारमा करेक्सन भएको हो ।
बजार उकालो लागेपछि लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका थिए । बजार विस्तारका नीतिगत र संस्थागत सुधारका कार्यक्रम हुने भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन् । यसका साथै लगानीयोग्य पुँजी सहज भएकाले पनि बजार प्रभावित भएको हो । लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भएकाले कारोबार रकममा सुधार भएको छ ।
बजार ओरालो लागे पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम बढेको छ । यस दिन १ सय ६९ कम्पनीको ११ हजार १ सय ३ पटकको कारोबारमा रु. ९४ करोड ९६ लाख २९ हजार ३ सय ९ बराबरको २६ लाख २७ हजार ८ सय ३२ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ५४ दशमलव ३९ स्केलमा पुगेको छ ।
आरएसआई न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेर रु. १५ खर्ब ९ अर्बमा सीमित भएको छ । त्यसैगरी, फ्लोट बजार पुँजीकरण पनि घटेर रु. ५ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ ।
कारोबार रकम र सेयर संख्याका आधारमा यस दिन बैंक अफ काठमाडौंको संस्थापक सेयर अगाडि रहेको छ । यस दिन सो बैंकको रु. १२ करोड २९ लाखबराबरको ५ लाख ७९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर खरिदबिक्री भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा भने प्रिमियर इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ । सो कम्पनीको ४ सय ८ पटक कारोबार भएको छ ।
यस दिन सिर्जना फाइनान्स, सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र काबेली विकास बैंकको सेयरमूल्य करिब १० प्रतिशत बढेको छ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य यस दिन करिब १० प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएको १ सय ६९ कम्पनीमध्ये ५२ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने ९९ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी १८ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
सोमबार कारोबारमा आएको अन्य र व्यापार समूहको परिसूचकबाहेक अरू सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । यस दिन अन्य समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत बढेको छ । होटेल समूहको परिसूचक यस दिन १ दशमलव ९४ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यसैगरी, जलविद्युत् समूहको परिसूचक १ दशमलव ८२ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको १ दशमलव २२ प्रतिशत, उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक समूहको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, बिमा समूहको शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत र माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशलमव ४१ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएको व्यापार समूहको परिसूचक भने यस दिन स्थिर रहेको छ ।